Saịtị ahụ na-ewere iwu nzuzo nke onye ọrụ dị oke mkpa ma na-agbaso iwu na ụkpụrụ dị mkpa. Biko gụọ nke ọma na Nzuzo nzuzo tupu ịmalite iji ya. Ọ bụrụ n’ịnọgide na-eji ọrụ anyị, ị gụchapụla ma ghọta ihe niile nke nkwekọrịta anyị.
Saịtị ahụ na-asọpụrụ ma na-echebe nzuzo nke ndị ọrụ niile nke ọrụ ahụ. Iji nye gị ọrụ dị mma na ahaziri iche, Saịtị ahụ ga-eji ma gosipụta ozi nkeonwe gị dabere na usoro nke iwu nzuzo a. Ewezuga otu enyere n'iwu na nzuzo a, Saịtị ahụ agaghị ekpughe ma ọ bụ nye ndị ọzọ ozi dị otú ahụ n'enweghị ikike tupu enyere gị aka. Saịtị ahụ ga - emelite iwu nzuzo a site n'oge ruo n'oge. Mgbe ikwenye na ọrụ iji nkwekọrịta nke saịtị, ewerela na ị kwenyero na ọdịnaya niile nke iwu nzuzo a. Iwu nzuzo a bụ akụkụ dị mkpa nke nkwekọrịta iji ọrụ anyị.
1.Mpepu nke Ngwa
a)Mgbe ịdebanye aha na Akaụntụ anyị, ozi ndebanye nkeonwe ị nyere dị ka ihe saịtị ahụ si dị;
b) Mgbe ị jiri ọrụ sava saịtị ma ọ bụ gaa na ibe weebụ, Saịtị ahụ na-anata ma dekọba ozi gị na ihe nchọgharị gị na kọmputa, gụnyere mana ejedebeghị na adreesị IP gị, ụdị ihe nchọgharị, asụsụ eji, ụbọchị nnweta na oge, ozi ngwanro na ngwanro, yana ndekọ ndekọ weebụ ịchọrọ;
c) Nwepụta data onwe onye nke Sitere n'aka ndị mmekọ azụmahịa site na usoro iwu.
d)Saịtị a machibidoro ndị ọrụ izipu ozi ọjọọ, dịka ịgba ọtọ, ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, na okwu rere ure. Anyị ga-enyocha ọdịnaya edepụtara. Ozugbo achọtara ozi ọjọọ, ikike niile nke onye ọrụ ahụ ga-enwe nkwarụ.
Understand ghọtara ma kwenye na ozi a anaghị emetụta iwu nzuzo a:
a) Ozi isiokwu ị banyere mgbe ị na-eji ọrụ ọchụchọ nke nyiwe anyị nyere;
b) Ozi ndị bara uru na data saịtị ahụ na-anakọta ma wepụta gị, gụnyere mana ejedebeghị na isonye na mmemme, ozi azụmahịa na nkọwapụta nkọwapụta;
c) Imebi iwu ma ọ bụ iwu dị iche iche na usoro nke saịtị ahụ megidere gị.
2. Ojiji nke Ozi
a)Saịtị ahụ agaghị enye, ree, mgbazinye, kekọrịta ma ọ bụ ahia ozi nkeonwe gị n’ebe ndị ọzọ na-enweghị njikọ, belụsọ ma inwetara ikike gị tupu oge eruo, ma ọ bụ ndị ọzọ na saịtị ahụ (tinyere ndị otu saịtị ahụ) nye gị iche na ọrụ ma ọ bụ jikọrọ ọnụ, ma mgbe ọrụ agwụchara, a ga-egbochi ha ị nweta ihe niile gụnyere ndị nke ha nwere na mbụ.
b) Saịtị a anaghị ekwe ka ndị ọzọ nakọta, dezie, ree ma ọ bụ kesaa ozi gbasara gị n’efu site n’ụzọ ọ bụla. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ji saịtị eme ihe ọ bụla na-etinye aka na ọrụ ndị a dị n'elu, Saịtị ahụ nwere ikike ịkwụsị onye nkwekọrịta ọrụ ya ozugbo ịchọpụta.
c)Maka ebumnuche nke ijere ndị ọrụ ozi, Saịtị ahụ nwere ike inye gị ozi ịmasị site na iji ozi nkeonwe gị, gụnyere mana ejedebeghị na izigara gị ngwaahịa na ozi ozi, or sharing information with our partners so that they can send you information about their products and services (the latter requires your prior consent).
f)In a transaction created on the Site's platform, if any party to the transaction fulfills or partially fulfills its transaction obligations and requests for information disclosure, the Site has the right to decide to provide the user with necessary information such as the contact information of its counterparty to the transaction, iji mee ka mmejuputa azụmaahịa ahụ ma ọ bụ idozi esemokwu dị mfe.
g) Ngosipụta ndị ọzọ na saịtị ahụ lere ihe kwesịrị ekwesị n'iwu, ụkpụrụ ma ọ bụ atumatu saịtị weebụ.
4. Nchekwa Ozi na Ngbanwe
A ga-echekwa ozi na data gbasara saịtị a kpokọta na ihe nkesa nke saịtị ma / ma ọ bụ ụlọ ọrụ ejikọtara ya, enwere ike ibunye ozi na ozi ndị a na obodo gị, mpaghara ma ọ bụ esenidụt ebe ozi na data nke Sitere chọkọtara ma nweta, echekwara ma gosipụta esenidụt.
a) Ọ bụrụ n’ịgaghị anabata kuki, anyị ga-ewepụta ma ọ bụ nweta saịtị anyị na kọmputa gị ka i wee banye ma ọ bụ jiri ọrụ ikpo okwu anyị ma ọ bụ ọrụ anyị na-adabere na kuki. Iji kuki, anyị nwere ike ịnye gị ọrụ ọrụ echebara echiche, tinyere ọrụ nkwalite.
a)ị nwere ikike ịhọrọ ịnabata ma ọ bụ jụ kuki. Can nwere ike jụ ịnabata kuki site na imezi ntọala ihe nchọgharị gị. Agbanyeghị, ma ọ bụrụ na ị họrọ ịnabata kuki, ị nwere ike ị gaghị enwe ike ịbanye ma ọ bụ jiri ọrụ weebụ ma ọ bụ atụmatụ nke dabere na kuki.
c) Iwu a ga-emetụta ozi enwetara site na kuki nke saịtị ahụ setịpụrụ.
6. Nchekwa Ozi
a) Akaụntụ anyị nwere ọrụ nchekwa nchekwa. Biko debe aha njirimara gị na ozi paswọọdụ gị nke ọma. Saịtị a ga - ahụ na ozi gị agaghị efu, kparịrị ma ọ bụ gbanwee site na izo ya paswọọdụ njikwa na ihe nchekwa ndị ọzọ. Agbanyeghị usoro nchekwa ndị a kpọtụrụ aha, biko mara na odighi "perfect security measures" on the information network.
b) When using the Site's network services for online transactions, you inevitably need to disclose your personal information, such as contact information or postal address, nye ndị nnọchi anya ma ọ bụ ndị nnọchi anya ha. Biko chebe ozi nkeonwe gị ma nye ya ndị ọzọ naanị mgbe ọ dị mkpa. Ọ bụrụ n’ịchọpụta na ozi gbasara gị na-atọpụ, aha njirimara anyị na paswọọdụ anyị, biko kpọtụrụ onye ahịa anyị ozugbo ka saịtị anyị nwee ike ibute ụzọ.